Ọ dịghị onye ga-agwa gị eziokwu 10 banyere Trenbolone Acetate | AASraw ntụ ntụ
Ọ dịghị onye ga-agwa gị eziokwu 10 banyere Trenbolone Acetate
/blog/Trenbolone Acetate/Ọ dịghị onye ga-agwa gị eziokwu 10 banyere Trenbolone Acetate
Ihe na 12 / 06 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Trenbolone Acetate. O nwere 1 Comment.
Gịnị Bụ Trenbolone Acetate? Kedu ka Trenbolone Acetate Work?
Kedu ihe acetate nke trenbolone ji?
Esi eji Trenbolone acetate?
Na onunu ogwu nke Trenbolone acetate.
Ndabere Cycles maka Trenbolone Acetate
Kedu ihe ị nwere ike ịtụ anya site na Trenbolone?
Kedu uru nke Trenbolone Acetate?
Kedu ihe na-emetụta nke Trenbolone acetate? Ebee ịzụta Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ online?
Trenbolone acetate isi agwa:
aha: Trenbolone acetate
Ọbara arọ: 312.4
Nchekwa Nche: 0-6 ° C
Gịnị Bụ Trenbolone Acetate?
Trenbolone bụ otu n'ime ihe kachasị ike na ike ndị steroid dị. Ihe ọzọ bụ, ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị kachasị ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ịgba ụda na ịkụcha usoro ihe omume. Ọ bụrụ na ị na - atụle Trenbolone Acetate na oge ọzọ ị ga - eme, jide n'aka na ị ghọtara iji eji ya mee ihe iji kwadobe onwe gị.
N'iji echiche nke uche, Trenbolone Acetate bụ ụdị nandrolone, nke nne na nna na Deca Durabolin. Dị ka ndị dị otú a, ị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ ụdị ọrụ ahụ. Otú ọ dị, Tren Acetate na-eme mgbanwe ụfọdụ na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama. Nke mbụ, ngwaahịa a anaghị eme ka ọ dị mma, ma ọ bụ gbanwee na estrogen n'ime ọbara. Nke a bụ ozi ọma maka ndị na-echekarị na androgenic mmetụta nke steroid. Nke abụọ, ọ na-eburu ester dị mkpirikpi nke pụtara na ọ na-amalite ịrụ ọrụ ozugbo e jiri ya. Ọ nwere ọkara ọkara nke dị n'okpuru ụbọchị atọ, ya mere nkwụsị ọ bụla kwa ụbọchị kacha mma.
Kedu ka Trenbolone Acetate si eme ọrụ?
IGF-1 bụ hormone na-emekarị bụ nke nwere protein. Ọ dị oke ike ma nwee ike anabolic properties. Ọ na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ime mgbake na nlọghachi nke anụ ahụ. Mmetụta nke hormone a dabeere na protein a bụ ihe doro anya na ọ dị ike n'ihe dịka sel ọ bụla n'ime ahụ mmadụ.
Ọ na-ewusi ma na-enye aka na mgbake nke anụ ahụ ahụ, cartilage, usoro nkwụsị nke etiti, njikọta na akwara, na usoro mgbagwoju anya.
E wezụga ịkwalite emepụta ọbara ọbara uhie, trenbolone acetate nwere ike ịbụ naanị ọrụ nke nwere ike ịpụta mmepụta nke IGF-1 hormone. N'ihi nke a, ọ na-enye aka na-eme ka enwekwu obi mgbu na-akwalite mgbake.
E wezụga nke acetate trenbolone a na-egbochi glucocorticoid hormones, nke nwere mmetụta na-adịghị mma nke steroid ndị anabolic. A makwaara dị ka hormones na-akpata nchekasị, a maara na hormones glucocorticoid kpatara ahụ ike anụ ahụ ma na-akwalite abụba na-ewuli elu. Site na iji acetate trenbolone, a na-edebe nsogbu nke glucocorticoid hormones.
Akụkụ Acetate na-akpa àgwà dị ka ọtụtụ ndị ọzọ steroid. Ọ na - eme ka ahụ gị nwee ike ịmepụta protein na ọ na - enyere anụ ahụ gị aka na - ejide nitrogen. Mgbe ahụ gị na-enwe ike ịmepụta ndị na-edozi ngwa ngwa, mgbe ụlọ ihe owuwu ahụ maka protein ndị ahụ (ya bụ nitrogen) dị n'ụba, ị nwere ike ịmalite ịmalite ịzụlite ahụ na oke ọnụ. E wezụga na nke a, Trenbolone Acetate ga-arụkwa ọrụ iji kwalite insulin dị ka ihe na-akpata, nke bụ maka nrụzi na rejuvenating anụ ahụ n'ime ahụ gị. Ọ na-emekwa ka ọbara ọbara na-aba ụba dị ukwuu; nwere ọtụtụ ọbara ọbara uhie, ị ga - eme ka ikuku gị dịkwuo mma ma mee ka ha bụrụ ebe kachasị mma maka ibu.
Trenbolone Acetate dị na mbụ dị ka ngwaahịa ọgwụ anụmanụ Finaject, nke anaghịzi adị. Ndị ọrụ steroid emepụtawokwa trenbolone acetate sitere na anụ Finaplix na-eji ihe akụrụngwa eme ihe. Ka ọ dị ugbu a, a na-ere ụdị ọgwụ dị iche iche na-abụghị nke ọgwụ site na labs labs (UGLs), na ọtụtụ ndị ọrụ na-azụta powdered trenbolone acetate na-eme onwe ha injectable preparations.
Ntughari nke acetate trenbolone n'ime akwukwo nri bu 50 mg / ml. Ebe a na-eme ka ndị na-eme ka ndị na-emetọ ihe na-emetụta ihe ndị dị ka mmanya benzyl ma ọ bụ benzyl benzoate, enwere ike ịchọta concentrations nke 75-100 mg / mL, ihe ndị a bụ ụdị nhazi ụlọ nyocha. Otú ọ dị, nkwarụ dị elu karịa 50 mg / mL bụ na enwere ike ịba ụba nke "ụkwara ụkwara" - nrụrụ dị mkpirikpi ma dị njọ nke na-adịgide adịgide ma ọ bụ otu minit mgbe a gwakasịrị ya, mgbe ọ na-ejikọta ya na ịṅụ iyi. Otú ọ dị, ọbụna na ọkwa dị elu, maka ọtụtụ ndị ọrụ a bụ nsogbu naanị oge, ọ naghị eme ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe mere ị ga-eji tụlee ịdị na-egbochi ịta ahụhụ ma ọ bụrụ na ị na-eme nkwadebe nke onwe ya, ọ bụ ezughị ihe mere ị ga-eji kwado ngwaahịa trenbolone acetate na 75-100 mg / ml.
Trenbolone bụ steroid nke nwere uru nke na-enweghị ihe mgbochi metabolism, na aromatase ma ọ bụ 5alpha-reductase na-emetụta ya; nke ịbụ onye kpụ ọkụ n'ọnụ nke Class I steroid jikọtara aka na androgen receptor; na inwe obere oge ndụ nke ihe dịka otu ụbọchị. Njirimara ikpeazụ a na-eme ka ọ baara ya uru dị mkpirikpi, dịka ntughari site n'ọbara dị irè na-arụ ọrụ dị oke ala maka mgbake bụ ngwa ngwa.
Ihe dị ka mita ise kwa ụbọchị nke acetate trenbolone bụ ezigbo dosing maka onye na mbido mbụ ya ma ọ bụ onye ka na-erubeghị, kwuo, sị, 20 pound na njedebe ya; ebe onye 100 mg / ụbọchị nwere ike ịhọrọ ya site n'aka onye toro eto karị nke nweelarịrị ihe karịrị nke a. N'okwu ole na ole, a ga-enwe ike ịhọrọ nkwụsị dị ka 35 mg / ụbọchị n'ihi onye ọrụ nwere mmetụta dị iche iche na ọgwụ ahụ gbasara sati abalị ma ọ bụ oké mkpali CNS.
Ọ bụ ezie na ndị a nwere ike iyi ka ọ dị ntakịrị obere dosages - na maka ọ bụla ọzọ injectable ha ga-abụ obere doses dị ka otu klas I androgen - trenbolone bụ ihe dịka okpukpu atọ karịa milligram karịa ọtụtụ injectables na androgen receptor. Ya mere, 50 mg / day trenbolone, tinyere ọgwụ dị irè nke ọgwụ klas II nke dịka 50 mg / ụbọchị nke Dianabol, na-eme maka nchịkọta dị irè n'agbanyeghị mkpanye milligram kwa izu dị mma.
Trenbolone bụ otu n'ime androgens kasị dị irè na-enyere aka na abụba. Ma n'adịghị ka ụfọdụ na-azọrọ, ọ dịghị ọrụ pụrụ iche nke ester ester: ndị ọzọ esters nke trenbolone dị oke irè.
Na onunu ogwu nke Trenbolone acetate
Ụdị Trenbolone Acetate dịgasị iche na-adabere na usoro gị na nchịkọta. N'ime oge okirikiri oge, ọtụtụ ndị na-ahụ ozu na-achọpụta na 50mg ụbọchị ọ bụla dị mma ma dị irè. Ụfọdụ ndị ikom na-anabata 100mg ụbọchị ọ bụla n'enweghị nsogbu ọ bụla, ha chọpụta na nke a na-enye nsonaazụ kacha mma maka ha. N'ime oge mgbapụ, ndị mmadụ na-agbanye envelopu obere ntakịrị na Tren ma jiri doses dị elu karịa 100mg kwa ụbọchị ọ bụla, ma ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịnabata ndị a dịka ihe ize ndụ nke mmetụta na-abawanye. Ọ dịghị onye kwesịrị iji ihe karịrị 200mg kwa ụbọchị ọ bụla, ọbụlagodi na ọ dị ha ka ha na-anabata ya nke ọma.
Otu okirikiri Trenbolone acetate nwere ike ịbụ otu kachasị mma anabolic steroid okirikiri onye ọ bụla nwere ike ịhazi. Nke a bụ nnukwu steroid nke anabolic siri ike nke dị irè karị karịa ọtụtụ steroid ndị ọzọ jikọtara ọnụ. Ọ bụ ezie na nke ahụ na-adọrọ adọrọ, anyị nwere ntakịrị akụkọ maka ụfọdụ; ụfọdụ agaghị enwe ike ijikwa usoro Trenbolone acetate. Ụfọdụ ndị ikom adịghị anabata ọgwụ mgbochi Trenbolone nke ọma nakwa na nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị mma ọ bụ naanị ụzọ ọ dị. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke ga-enwe aṅụrị a, ma na-eme atụmatụ Trenbolone Acetate cycle nke ọma.
Trenbolone acetate bụ otu n'ime ọtụtụ ebe na kachasị mfe ịchịkwa ụdị Tren niile, ya mere, otu n'ime ihe ndị kachasị mma. Mgbe ị na-eji steroid a, ị ghaghị iji Trenbolone Hexahydrobencylcarbonate ma ọ bụ Trenbolone-Enanthate nweta nsonaazụ kacha mma ọ bụ ezie na ị nwere ikike iji ha mee ihe.
Ụdị acetate bụ ọganihu kachasị mma na Tren A ị nwere ike ịmụta mgbe ị na-anwụ anwụ, ma ọ bụ n'oge oge mmepe. Otú ọ dị, ọ dịkwa oke irè n'oge abụọ. N'ụzọ dị ịtụnanya, a pụrụ iji tetobolone acetate mee ihe site na nrụpụta mmemme n'oge ọtụtụ cycles n'agbanyeghị nzube ahụ.
Ọ bụ ezie na a na-ekwu nke a dị ka ụzọ dị mkpa, eziokwu nke okwu a bụ na ọ dị irè ma ọ dịghị n'ụzọ ọbụla na-egosi adịghị ike. Nke a ga - adị mma maka onye mbido ịghara ịkọwa na ọ ga - adịkwa ọtụtụ karịa ihe ọtụtụ n'ime ha ga - achọ.
Ihe omuma a nke a ga - achota ojiji nke testosterone ebe Tren hormone na - egbochi mmeputa nke testosterone. N'ezie, anyị na-akwado na iji testosterone n'oge niile Trenbolone cycles iji gbakwunye na ọnụ ọgụgụ dị ala nke ahụ.
N'oge nkenke nke usoro, usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị bụ 50mg kwa ụbọchị, ụbọchị ọ bụla. Enwere ike imezi nke a na 75mg kwa ụbọchị ọ bụla ma ọ bụrụ na ahu gị na-egosi ndidi nke 50mg dose. N'ọnọdụ nkịtị, oge kwesịrị ekwesị iji mee ihe bụ izu 8 ọ bụ ezie na izu 12 na-anabata ya n'agbanyeghị agbatị a na-eji. Mara, ọ dị elu na ọgwụ dị elu karịa ihe ize ndụ nke mmetụta dị oke mkpa ka ị ga-agụ isiokwu a ka ị mụta esi zere ihe ọ bụla metụtara mmetụta nke Tren A.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ga-eji steroid maka izu 12, ọ bara uru inwe ahụmahụ na-eji hormone ma ọ bụ tinye aka na ụfọdụ asọmpi ma ọ bụ nzube pụrụ iche. The steroid na-ekpuchi nke ọma Dianabol na testosterone n'oge okirikiri mgbe ị nweghị ọrụ ọ bụla. Tren nwekwara ike ịchọta nke ọma na testosterone ma ọ bụ ndị ọzọ anabolic steroid gụnyere Anavar na Winstrol n'oge oge ịcha.
Ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ na steroid, ọganihu dị elu ga-adị mma maka gị. Ọ na-amalite site na 100mg kwa ụbọchị ọ bụla, ma n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị ihe mgbatị usoro na 100mg kwa ụbọchị n'oge ojiji.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe amamihe dị na iji Trenbolone acetate kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu n'egwuregwu oge ochie n'ihi na nke a ga-eme ka ụfọdụ nrụgide anụ ahụ na-adịghị mkpa. Otú ọ dị, ịnwere ike iji 100mg kwa ụbọchị n'oge nri ma karịsịa nso gị asọmpi.
Ntughari Trenbolone kasị mma maka oge ga-adị 100mg ụbọchị ọ bụla ma nwere ike jikọtara ya na Testosterone na Dbol. A na-atụ aro usoro ntanetị maka ndị ọrụ toro eto, nke pụtara na ị nwere ike ịgbakwunye na Deca-Durabolin na testosterone maka izu 12.
Deca kwesịrị iwepụ ya n'izu 12 ma ị nwere ike ijide Testosterone na Trenbolone naanị. E nwere nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ ma ọ bụrụ na ịbịaru Trenbolone acetate okirikiri ma ọ bụ nwụọ ma nke a nwere ike ịbụ ihe na-akpali akpali n'ezie. Ndụmọdụ kachasị mma bụ ịhọrọ mgbe niile nhọrọ kwesịrị ekwesị maka gị ma jiri steroid dị ka akwadoro.
Meteoric ịrị elu na aha Tren dị ịrịba ama na-atụle na ọ na-mgbe niile na-atụle na a pụrụ ịdabere na fallback nke testosterone. Nnyocha nchọpụta ahụ egosiwo na Trenbolone akọwapụta testosterone na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ntanye.
Mmetụta anabolic ya na-etinye aka n'ọtụtụ dị ala, nke na-ebute ọkwa dị elu nke nkwekọrịta ọhụrụ, ma yie ka ọ na-enye ahụ ike ijigide ngwongwo muscle mgbe ọ bụla enwere mpekere calorie. E nwere ike ikwu na nsonaazụ abụọ ahụ nwere ikike Trenbolone nwere njikọta na Androgen Reactor (AR) ugboro atọ ọnụ ọgụgụ testosterone. Ọ na-emekwa ka njigide nitrogen na njikọ protein dị na mọzụlụ.
Ọdọ na-amụbawanye na mgbochi ya na o yikarịrị ka ọ ga-enwe ike ịme ka ọ dị elu karịa ya, gụnyere nke ahụ megide anụ ahụ na-adọrọ adọrọ. Nsonaazụ na iwepu abụba dị nha na usoro e ji. A na-enyocha ebe a dịka ọkpụkpụ kachasị abụba mgbe e kere.
Ndị na-anọghị na ya bụ ọtụtụ ọnụọgụ na-emetụta tụnyere testosterone. E nwebeghị ihe ndekọ ọbara hemoglobin dị elu na ọnụ ọgụgụ ọbara ọbara ọbara. Ihe ndị ọzọ na-emetụta dịka ọkpụkpụ de-mineralization na prostate gbasaa na-apụtaghị na ọ na-anọghị.
The ọzọ uru na Trenbolone nwere bụ na ọ naghị emeghachi omume dị ka estrogen, si otú a na-ezere nsogbu niile na-ebute ya dị ka mmepe nke ara, akpụ na akpụkpọ anụ.
Trenbolone enweghị ike ikwu ọnụ n'ihi na ọ bụ naanị ahịa dị ka mgbakwunye maka ebumnuche ọgwụgwọ. Iji jiri ụmụ mmadụ mee ihe n'enweghị ihe mgbochi, a ghaghị ịpụta Tren site na ụdị pellet mbụ ma gbanwee maka iji ụmụ mmadụ na-agbakwụnye ndị na-adịghị egbu egbu. Mgbe emeziri nke ọma, nke a na-eme ka Tren dị mma maka ịbanye n'ime ụmụ mmadụ.
A na - ewere ọnụ dị ka akụkụ nke 'okirikiri' a maara dị ka Tren Cycle. Otu 'okirikiri' bu ihe ndi ozo choro iji wegha ha na ihe ha ji eme ha. Ogologo Ụgba ahụ nwere nsonaazụ dị mma na ọ dị irè ma ma na-akwalite izu ike ma na-efesa abụba.
Njikwa na tweaking nke Tren Cycle na-enyere ndị mmadụ aka imesi onye mbụ ma ọ bụ nke ikpeazụ ike dị ka mkpa ha si dị. E nwere ihe dị iche iche nke Cycle, site na Basic na Advanced, inye ndị na-eme egwuregwu na nkwụsị dị iche na nsonaazụ Trenbolone ha chọrọ.
A na-atụ aro naanị oghere maka ndị ikom na ndị inyom kwesịrị izere ya. Ndị mmadụ kwesịrị ịmalite na ya naanị ma ọ bụrụ na ha ewerela ihe anabolics tupu. Ụdị nhazi dị n'etiti 50mg na 100mg kwa ụbọchị ọ bụla. 100mg bụ ihe kachasị mkpa na ihe kachasị mkpa maka onye ọ bụla. A na-ejikarị usoro nrịba elu eme ihe na oge nkwụsị.
Otu ihe mere ị kwesịrị iji tụlee Trenbolone Acetate bụ n'ihi ọtụtụ n uru nke gụnyere ndị na-esonụ:
Ike ike na-arịwanye elu: Akwa utịp androgenic na-ebute ngwa ngwa nke uru na uka.Fat Ọkụ: Ọ na-enyekwa aka na calorie ndị na-ere ọkụ ma na-ewepu abụba abụba site na ijikọta mkpụrụ ndụ abụba.
Enweghị aromatization: Onye na-adịghị ahụ maka steroid anaghị abanye n'ime estrogen ebe ọ bụ na a gaghị akpọ ọkụ ọ bụla ọkụ.
Nke oma: Ị chọrọ ka obere Trenbolone tụnyere ndị ọzọ. I nwekwara ike iche iche iche dabere na ọchịchọ onwe onye. Dịka ọmụmaatụ, Tren A (Tren Acetate) nwere obere ndụ (3 ụbọchị) tụnyere Tren E (Tren Trenbolone Enanthate).
Ọ bụ ezie na Trenbolone nwere ike ịchọta ọnụ, ị ga-enweta nsonaazụ kachasị mma site na ịga maka ọdịdị injectable. Nke a bụ n'ihi na ọ na-adị ngwa ma dịrị mfe banye n'ime ahụ ma malite ịmalite ịrụ ọrụ ozugbo. A na-ebelata ihe ize ndụ ụfọdụ n'ime ya na-efu na usoro nsị.
Ngwá ọgwụ a tụrụ aro maka Trenbolone Acetate dị n'etiti 300mg na 700mg kwa izu. Dị ka ihe ọ bụla steroid ma ọ bụ nke mmeju ahụ ị na-aga naanị Trenbolone na iwu na nke a na-ebelata ohere ọ bụla mmetụta.
Kedu ihe na-emetụta nke Trenbolone acetate?
Akụkụ nke iji Trenbolone Acetate nke ọma na-agụnye ịghọta na izere mmetụta ya, mgbe o kwere omume. Enwere ike ime ka mmetụta ndị a dị nwayọọ ma dịkwuo njọ.
Aromatization - Ọ bụ ezie na mmetụta nke estrogenic dị ka gynecomastia nwere ike iyi ihe ọ bụla ma dị nwayọọ, ha dị mfe iji mebie site n'iji onye na-eme ihe aromatase dị ka Arimidex n'oge oge gị. Nke a bụ ihe achọrọ.
Mmanụ na mmanu mmanu - Ọ bụghị mmadụ nile ga-enwe mmetụta ndị a, ọtụtụ n'ime ndị na-achọpụta na ihe otutu ahụ adịghị emerụ ahụ. A pụghị imebi ya, ma ị nwere ike iji ya na ngwaahịa ndị dị n'elu bengoyl peroxide ma ọ bụ salicylic acid.
Enweghi ike - Nke a bụ akụkụ ọzọ nke a na-apụghị izere maka ụfọdụ ndị ikom. Ọ dị mkpa iburu n'uche na akpụkpọ ụkwụ Trenbolone Acetate adịghị emetụta onye ọ bụla - ọ na-emetụta ndị ikom a na-ebute n'ọdịdị. N'ikwu nke ọma, Tren nwere ike ịgba ọsọ ma ọ bụ kwadoro ntutu isi nke dịbu, ma ọ dịghị akpata ya.
Nsogbu ọbara mgbali elu - Ọkụ na steroid dị ka ọ nwere ike ịmalite iwelie ọbara mgbali elu gị. Ọ bụ ezie na nke a abụghị nsogbu ma ọ bụrụ na ị dị mma, ụmụ nwoke ndị nwere ọbara mgbali elu kwesịrị izere Trenbolone Acetate.
Mkpụrụ obi ụfụ - Ụfọdụ ndị ikom ga-enweta ehighi ura, nke a pụkwara ịdị site na nwayọọ ruo n'oké njọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ikom nwere ike iji diphenhydramine maka otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka ha wee hie ụra, ndị ikom ndị ọzọ enweghị ike ịchọta enyemaka ọ bụla maka ụbọchị. Nke a bụ ihe gbasara nkwụsị nke onwe gị, a ga-ezere ya site n'ịdị na-ewelata ọgwụ gị.
Siri abalị - Ụfọdụ ndị ikom nwere ike ịnweta sweats abalị n'ihi mgbanwe nke hormonal, nke a bụkarị ihe ngosi nke njirimara nke estrogen. Iji ogwu aromatase nwere ike igbochi ya.
Nsogbu mmekọahụ - Mgbe a na-eji ya akwa ma ọ bụ ogologo oge, Trenbolone nwere ike ime ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ ma ọ bụ enweghị libido. Nye ụfọdụ, iwelata ọgwụ ahụ na-ebelata mgbaàmà ndị a. Nye ndị ọzọ, a naghị anabata Tren na ọgwụ ọ bụla.
Trenbolone acetate bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, nke kasị dị ike, ma na-ahụkarị steroid nke anabolic dị ka ihe a kpọrọ mmadụ. Ọ dabara nke ọma na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla okirikiri ma ọ bụ nchịkọta, ihe ọ na-arụ enweghịkwa atụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'obi na Tren abụghị maka ndị mbido; ị ga - eji ya ma ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ahụmahụ na steroid anabolic steroid.
Ebee ịzụta Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ online?
Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ bụ kemịkal na-emepụta ọgwụ na-egbuke egbuke, ma a ghaghị ịchọta ya ngwa ngwa na anabolic steroid black market n'enweghị mgbalị ọ bụla. Ọ na-adịkarị mfe ma dị mfe arụpụta na ọ ga-enwetara maka ezi uche ahịa.Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ dị dị ka ụmụ mmadụ-ọkwa ọgwụ na ngwaahịa, yana n'okpuru n'okpuruala ụlọ nyocha (UGL) ọkwa ngwaahịa na ahịa. Esemokwu dị iche iche ebe a, na njikwa dị mma bụ isi okwu, na ọkwa Trenbolone acetate raw ntụ ọka na-abụkarị ọnụ ọnụ maka ihe doro anya.
A pụrụ ịzụta Trenbolone Acetate raw powder nwere ike ịzụta site na isi mmalite na ndị na-ere ahịa na ntanetị, yana omenala ndị mmadụ na-eme (nke bụ 'ndị na-eme egwuregwu'). Ahịa nwere ike ịdị iche. Ọgwụ Trenbolone Acetate raw ntụ ntụ enwere ike ịchọta ya maka USD4500-USD6000 / kg.Ọ bụrụ na ịhọta ntụ ntụ. A pụrụ inye iwu ka a nwalee ngwaahịa ahụ ka ị nwee ike ịchekwa oge na ego.
Kedu ka esi kpoo raw trenbolone acetate ntụ ntụ?
Ntughari 1 Response
Filipa Tavares12 / 06 / 2017 na 10: 18 pm
Hi! Ahụrụ m ebe nrụọrụ weebụ gị ma echere m na ọ dị ezigbo mma.
Nọgidenụ na-eme nnukwu ihe!
Ebee ka ịzụta Testosterone Enanthate raw ntụ ntụ online?	Primo (Methenolone Acetate) bụ onye na-agwọ ọrịa nke anabolic kasị dịrị nchebe maka nwanyị